दिनमा ५ पटक खान्छु : प्रियंका - जीवन शैली - प्रकाशितः वैशाख १९, २०७५ - नारी
दिनमा ५ पटक खान्छु : प्रियंका
नायिका प्रियंका कार्की सानदैखि पेट खाली राख्नु हुँदैन भनेर समय मिलाएर केही न केही खाइरहन्थिन् । ममीले ग्यास्ट्रिक हुन्छ भनेर कालो चियासँग ३ वटा थिनआरारोट बिस्कुट ख्वाउनुहुन्थ्यो जुन आजसम्म पनि उनको रुटिनमा सामेल छ । नायिका भएपछि धेरै कुरामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने उनको मान्यता छ । फिट एन्ड फाइन फिगर मेन्टेनका लागि प्रियंकाले आफ्नो खाने निश्चित रुटिन नै बनाएकी छिन् ।
उनी उसिनेका र ग्रिल परिकार बढी खान्छिन् । जंक फुड र चिल्ला खानेकुराबाट टाढै रहन्छिन् । जाडोहोस् वा गर्मी उनको पहिलो रोजाइमा सुप हुन्छ । उनले घरमा पनि रेडिमेड सुप टन्नै राखेकी हुन्छिन् । प्राय: लन्चबाहिरै गर्ने प्रियंका ग्रिल चिकेन तथा स्यान्डबिच बढी खान्छिन् ।
प्रियंका महिनाको १–२ पटक मात्र दाल, भात, तरकारी खान्छिन् । इभेन्ट तथा प्रोग्रामहरूतिर जाँदा पनि सुप एवं सलादहरू खाइरहन्छिन् । उनलाई दही एकदमै मनपर्छ । उनी दिनहुँ दही खान्छिन् । प्रियंका आधा दहीमा दूध मिक्स गरी खान रुचाउँछिन् । उनी दूध हालेको चिया–कफी कहिल्यै पिउँदिनन् । प्रियंकाका अनुसार फिगर मेन्टेन गर्न डाइट नै कन्ट्रोल गर्नुपर्छ अन्यथा २–३ घन्टा जिम गर्नुपर्छ । भोकै बसेर स्लिम भइने होइन, स्वस्थ खाना समय मिलाएर खाए फिट रहन सकिन्छ ।
बिहान कालो चिया र थिनआरारोट बिस्कुट ।
ब्रेकफास्ट : कर्नफ्लेक्समा दही वा दूधका साथै काजु, बदाम तथा भेनिला ।
लन्च : ब्राउन ब्रेड ग्रिल स्यान्डबिच, जुस ।
दिउँसो : कुनै पनि फलफूल, सुप ।
राति : ६ बजेअघि सलाद, दूध, सुप ।
परिकार : बिक्स क्याफे, कुपन्डोल ।
१. मसरुम क्रिम सुप
२. ग्रिल चिकेन स्यान्डबिच
वैशाख ३१, २०७५ - पहिरनअनुरूप शृंगार